NextMping | Chiitiko Keynote Spika
Ndatenda nekusarudza kushanda nemutambi wediki Cheryl Cran pachiitiko chako chiri kuuya. Pano iwe unowana zvese zvaunoda kugadzirira kuve naCheryl seanotaura mutauri weboka rako. Tinotarisira kukubatsira kuti ugadzire chiitiko chinoshamisa chemusangano!
Ona mavhidhiyo ese
Dhawunirodha yedu Gadziriso Logistics Guide
Inozivikanwa seye # 1 Ramangwana reBasa rinokurudzira naOnalytica, uye munyori wemabhuku gumi nepfumbamwe kusanganisira yechipiri edition ye "NextMapping ™ - Tarisira, Enda uye Gadzira Ramangwana reBasa" nebhuku rebasa rinofambidzana.
Mifananidzo yekudhinda uye yewebhu
Kuti uwane rumwe ruzivo rwekuti Cheryl anogona sei kugadzirisa kiyi yekutaura yako chiitiko chinotevera kubatana nesu nhasi.